Mogadishu City Club Oo Guul Muhiim Ah Ka gaartay Midnimo %
By Ramzi Yare	 On May 2, 2019
Xidigaha dowladda hoose ee Mogadishu City Club ayaa guul muhiim ka gaaray dhigooda Midnimo waxayna ciyaartan kusoo idlaatay 3-1 oo ay guusha kuraacday xidigaha Muqdisho City Club.
Qeybta 1aad labada koox ayaa soo bandhigay ciyaar aad u sareysa waxaana lagu kala maray 1-0 waxaana kooxda Muqdisho City Club u dhaliyay laacibka reer Kenya Marcelo Odhiambo.
Markii la isku soo laabtay Qeybta 2aad dheesha laacibka reer Kenya Marcel Odhiambo ayaa kooxdiisa u dhaliyay goolka labaad kulanka waxaa bandhigii xidigaha dowladda hose soo qatimay Hassan Saantos waxayna ciyaarta kusoo idlaatay 3-1 oo ay guusha kub qaateen xidigaha Muqdisho City Club.
Waa ka xunahay guuldarad ina soo gaarto waxaa diirada saaraynaa Kulamada inagu soo fuud leh si aan tiigsano kaalmaha hore ee kala horeynta horyaalka Somalia Premier League”waxaa sidaas ku waramay tababaraha kooxda Midnimo Ahmed Ismail Midnimo.
Allah ayaa mahad iska leh kulanka waxa u ahaa mid aad u adag,balse hadafkeena waxa uu ahaa in aan helno dhibcaha iminka si wanaagsan ayay ciyaartooyda kooxda isla qabsadeena waxaan ku rajo weynahay in aan ka farxino taageerayaasheena”waxaa sidaas ku waramay gudoomiye Abukar Yarowoo ah guddomiyaha Mogadishu City Club.
Muxuu Virgil van Dijk Ka Yidhi Haddii Ay Kooxdiisa Liverpool Awood U Yeelan Karto In Ay Anfield Ku Badasho Natiijadii Kulankii Barcelona